Backup & Clone Firmware နှင့် Error ကင်း Firmware များ ရောင်းနေပီ w... (သတင်းကောင်းပဲ) ~ ဘလော့ခရီးသည်
Backup & Clone Firmware နှင့် Error ကင်း Firmware များ ရောင်းနေပီ w... (သတင်းကောင်းပဲ)
ရှားပါး FIrmware နဲ့ Clone Firmware များပါပါတယ်.
Backup ထုတ်ထားသော Fimware များနဲ့ Error Fix (Edit )လုပ်ထားသော
Firmware များပါ ပါပါတယ်.
1000 GB or 2000GB (ဈေးနှုန်း သင့်ပါသည်)..
Firmware တစ်ခုချင်းလိုချင်လည်း ရပါတယ် . Online မှ link ချပေးပါတယ်.
ဆက်သွယ် ရန် ကိုအောင်ခန့် (YGN)